Kitty For Me: December 2008
FT Island ရဲ့ single အခွေသစ်လေး။ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဒီအခွေထဲမှာ သီချင်း ၃ ပုဒ်ကို အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားလို တစ်ပုဒ်စီဆိုထားတယ်။ အရင်တုန်းက သီချင်းဆိုရင် Hong Gi နဲ့ Won Bin ၂ ယောက်ထဲဆိုပေမယ့် အခု ဒီအခွေမှာ အကုန်လုံးဆိုထားကြတယ်။ အားလုံးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ အသံလေးတွေက တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ မိုက်တာပဲ။ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတာလေးလဲ ကောင်းတယ်။ အရမ်းကြီး အင်္ဂလိပ်စာ မညံ့ကြပါဘူး။ ဒီအခွေလေးက အခု fav ပဲ။
02.Life LikeaMusical
lyrics credit to: icylifememories.blogspot.com
Jong Hyung ရဲ့ Heya Performances တွေ ကြည့်ပြီးတော့ မူရင်းသီချင်းနားထောင်ချင်တာနဲ့ ရှာကြည့်လိုက်မိတယ်။ ဟီး စပိန်လို ဆိုလား အီတလီလိုဆိုလားပဲ။။ တစ်လုံးမှ နားမလည်ပေါင် (ကိုရီးယားသီချင်းကျတော့ နားလယ်တာကျနေတာပဲ)။ ဟဲဟဲ ထုံးစံအတိုင်းပဲ Jong Hyung ဆိုတာ နားထောင်နေကျမို့လားမသိဘူး မူရင်းဆိုတာကြီးကို မကြိုက်ဘူး။ အသံလေးလေးကြီးနဲ့လိုပဲ။ နားထောင်ကြည့်ချင်ရင်လဲ ရအောင် မူရင်းကို တင်လိုက်ပါတယ်။ ခံစားကြည့်ကြပါဦး။ :P
Posted by Me at 1:23 AM4comments:
Ah!!! I wanna wanna this calendar.... !_! ...
pic credit to FallenLove from soompi forum SHINee's Thread page 482.
Happy Birthday SHINee's ONEW
Happy Birthday SHINee's Leader Tofu ONEW
New Dog !!
got new dog at ygn home !! haha !! ဟိုတစ်ပတ်က ညီမလေး gtalk တက်လာတော့ သူ့ gtalk pic မှာ ခွေးလေးတစ်ကောင်တွေ့လိုက်တယ်။ အသဲပုံလေးဝိုင်းလို့ နာမည်ကလဲ ရေးထားလိုက်သေးတယ် Hee Bum တဲ့လေ။ ဟားဟား...ဒါဆိုသေချာပြီ အိမ်ကခွေးပဲဆိုတာ။ Hee Bum ဆိုတာ Super Junior ထဲက Hee Chul ရဲ့ ကြောင်နာမည်။ ဒါကို အိမ်မှာက ခွေးကိုပေးထားကြတယ်။ သူတို့က အဲဒီနာမည်ကို သဘောကျနေကြတာ။ ခွေးသိပ်မချစ်တတ်ပေမယ့် မြင်တော့လဲ ချစ်စရာလေးပါလားလို့ ထင်မိတယ်။ ၂ လ သမီးပဲ ရှိသေးတယ် အရမ်းလည်တယ်လို့ပြောတယ်။ အိမ်က ကြောင် ၂ ကောင်မှာ တစ်ကောင်နဲ့မတည့်ဘူးတဲ့။ ဘယ်တည့်မလဲ ဟိုကောင်ရဲ့ထ မင်းပန်းကန်ကို သွားလုစားတာကိုး။ အစားလဲကြီးတယ်တဲ့။ အညိုရောင်လေး...ချစ်စရာလေးပါ။ ရန်ကုန်ကို သင်္ကြန်ပြန်တော့မှပဲ တွေ့ရတော့မယ်။ အိမ်ပြန်ချင်လိုက်တာ....
Posted by Me at 6:27 PM 1 comment:
HAPPY BIRTHDAY ... MINHO
HAPPY BIRTHDAY SHINee's Charisma MINHO
ဒီသီချင်းလေးကြိုက်တယ်။ Twilight OST သီချင်းလေး။ ရုပ်ရှင်တော့DVDRip ထွက်လာမှပဲ ကြည့်တော့မယ်။ အခုတော့ ပိုက်ဆံမရှိဘူး...ဟီးဟီး။
Paramore - Decode [Twilight OST] [MF]
Posted by Me at 12:59 AM5comments:
အခု ဒီအခွေလေး ကြိုက်တယ်။ Michael Learns သီချင်းတွေ နားမထောင်ရတာ ကြာပြီ။ သူ့အသံက အရင်တုန်းကလိုပဲ မပြောင်းလဲဘူး...ချိုတုန်းပဲ။ အခုဒီအခွေထဲမှာ When Tomorrow Comes သီချင်းလေးကို သိပ်ကြိုက်တယ်။
02 - It’s Gonna Make Sense 03:35
Posted by Me at 6:58 PM 72 comments: